Nyochaa Ezigbo ọkà okwu ọkà okwu 5 | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ndị na-ekwu okwu, Ngwa, Nyocha
Taa, anyị ewetara gị nyocha na-atọ ụtọ. Anyị na-anwale ụbọchị ole na ole otu n’ime ngwa ụlọ achọsi ike. a smart ọkà okwu dakọtara na Alexa, kpọmkwem na Energy usoro Smart ọkà okwu 5. Ahụmahụ ahụ na-enye afọ ojuju.
Anyị na-ahụ otú ụlọ anyị, site na ngwaọrụ anyị, na-esiwanye modernized. Anyị nwere ngwa maka nhicha nke anyị nwere ike ijikwa na ama, dịka ndị na-ehicha agụụ. Ghara ikwu banyere usoro ntanetị nke anyị na-ejikwa, ma ọ bụ na-enweghị ekwentị mkpanaaka, na TV anyị.
1 Alexa na ọrụ anyị na Smart Ọkà Okwu 5
2 Mfe na oge a
3 Onye maara ihe nke oma 5 na akuku
4 Nka na ụzụ e ji mara Energy Sistem smart ọkà okwu 5
5 Smart ọkà okwu 5 teknuzu nkọwapụta tebụl
Alexa na ọrụ anyị na Smart Ọkà Okwu 5
Ekele dịrị ngwaọrụ dịka ọkà okwu smart Energy, anyị nwere ike ịnwe n’ọrụ anyị otu n’ime ndị enyemaka olu ama ama. Alexa, Onye enyemaka olu nke Amazon nile puru ime ihe nile g’enyere anyi aka g’enwe oru anyi.
Ozi niile na ọrụ anyị naanị site na ịkọ aha gị. Onye nwere ọgụgụ isi ga-enyere anyị aka inwe ozi ị chọrọ ozugbo naanị site n'ịjụ. Ntụziaka, ịgụ ozi, amụma ihu igwe, ihe niile anyị nwere ike iche banyere ya, naanị jụọ ya ọ zara. Karịa ka ị chere, na ebe a ị nwere ike ịgba ya na Amazon na mbupu n'efu.
Ọkà okwu maara ihe nke na-ekwu okwu 5 na-abịa ikpuchi ọdịiche dị n'ahịa ndị na-emepụta ole na ole ji obi ike. E wezụga ndị na-ekwu okwu nke Amazon, anyị ahụghị ọtụtụ ndị ọzọ iji tụlee. Onye nkwuputa okwu ike Energy Sistem na-enye ụda dị mma, njikọta dị mma yana imewe wee mechaa n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ.
Ngwaọrụ “ejikọrọ” nke ị nwere n'ụlọ nnukwu ọrụ ị ga-enwe ọkaibe okwu a. N’ụlọ ndị a na-emebu, ọbịbịa nke ngwa ngwa ụlọ dị nwayọ nwayọ. Agbanyeghi na ekele diri oriọna di ocha, onyo onyo onyo, ya na ama, n’igwe ama ama anyi, obere ulo anyi di amaka. N'ihi smart ọkà okwu 5, na mgbakwunye na ịge ntị na akụkọ ma ọ bụ mara amụma ihu igwe Anyị nwere ike inye kpọmkwem iwu ka Alexa. Bala ìhè nke ìhè, gbanye TV ma ọ bụ gbanyụọ ya, ma ọ bụ tinye ya ime ụlọ okpomọkụ na 25º.
Dị ka anyị na-ekwu, dabere na ngwaọrụ ndị nwere njikọ ịntanetị anyị nwere, ọ ga-aba uru karịa ọkà okwu anyị. Ya mere, ahụmahụ nke ojiji ga-adabere nke ukwuu na nke ọ bụla kpọmkwem ikpe. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwu na naanị ịdabere na ọkà okwu ga-akpọ egwu anyị, yana ịnweta Alexa maka ajụjụ ọ bụla adịlarị.
Mfe na oge a
Otu n'ime ihe bụ isi Hit kụrụ nke ahụ dị na mmalite na Amazon ndị ọkà okwu ọ bụ kpomkwem imewe. A akpachapụghị anya imewe na sober edoghi na na agba na ole na ole ohere. Ọbụna ụdị ndị ọhụrụ ahụ na-aga n'ihu na-ejigide agba ojii na ụdị cylindrical nwere usoro ndị bụ isi.
Energy Sistem gbanwere echiche a kpamkpam nke sober ọkà okwu na smart ọkà okwu 5. Na a squarer udi na Mkpa ọkụ shades na-eme ka Alexa bụrụ ihe kwesịrị ekwesị na ụdị ụlọ ọ bụla. Na-ewu na àgwà ihe, na a imecha na ìhè-acha anụnụ anụnụ na agba na ọkà okwu na plastic dị ọcha, ọ na-aga nke ọma site na anya.
Otu njirimara anụ ahụ nke ụdị okwu a, ọ bụrụ na anyị atụnyere ha na ndị anyị jiri nanị egwu egwu, bụ ọnọdụ ha. Anyị na-achọta njikwa na elu na nke a guzo ziri ezi na tebụl ma ọ bụ shelf awade a cylindrical ụda nke ahụ ka mma rute n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ ebe ọ dị. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-achọ zụta ya ugbu a na Amazon na-enweghị ebubo mbupu.
Onye maara ihe nke oma 5 na akuku
Yabụ anyị hụrụ na elu na playback akara bọtịnụ na ụfọdụ ndị ọzọ. Na ala anyị na-ahụ bọtịnụ bọtịnụ "kpọọ" Alexa. A bọtịnụ anyị ga-agbanye naanị ma ọ bụrụ na anyị ejiri igwe okwu. Na etiti anyị nwere bọtịnụ ngbanwu / ngbanwu nke na-emekwa dị ka egwu / nkwụsịtụ.
N'otu igbe anyị nwekwara olu elu na ala bọtịnụ. Ndị a ga-eje ozi songs na-atụ ma ọ bụ azụ. A bọtịnụ iji nweta menu Nke nhazi. Ndien ke akpatre a button na-akpali mmasị ịba uru, ka mechie igwe okwu. Site na bọtịnụ a na-arụ ọrụ, ọkụ ọkụ na-acha uhie uhie ga-agbanye na ọkà okwu. Na ọkà okwu ga-anụ olu anyị ma ọ bụrụ na anyị akpọ Alexa.
N'elu bọtịnụ ndị ahụ bụ igwe okwu abuo. Anyị ga-ekwu na anyị juru gị anya nke ukwuu magburu onwe uche. Ọ na-ege anyị ntị ma na-aga ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu Alexa si fọrọ ebe ọ bụla n'ime ụlọ. Ọbụna n’ebe dị anya karịa ka atụ anya.
Akụkụ ahụ gị ndị ọzọ na-arụ otu ihe ahụ. Ọ nwere mechie akụkụ nke ụgbụ na-ekwu okwu na-adaba adaba n'ime okpokoro oji ya. Na azụ ya anyị na-achọta ntinye ntinye na ọdụ ụgbọ njikọ inyeaka maka njikọ obere jaak. Onye na-ekwu okwu Smart 5 na-enye gị ọtụtụ, nweta ya ugbua na Amazon.
Nka na ụzụ e ji mara Energy Sistem smart ọkà okwu 5
Ọ bụrụ na anyị eleba anya na njirimara ọrụ nke ọkà okwu a na-enye anyị, anyị ga-ahụ eziokwu na nọmba na-atọ ụtọ. Onye maara ihe nke ọma 5 nwere 2.0 ụda stereo na a ike ihe karịrị ezigbo site na 16W. Atụla anya na ọkà okwu dị ike ịnụ ụda na-ada mba na mbara. Ma n'ime ụlọ ihi ụra ma ọ bụ n'ime ime ụlọ ọ na-enye a crisp, doro anya ụda na zuru ezu olu larịị.
La Njikọta Bluetooth nke akaụntụ bụ klas 2, onye na-arụ ọrụ 2.4 Ugboro ugboro Ghz na ruo mita 20. Na mgbakwunye na wireless Njikọ wifi ma ọ bụ bluetooth anyị nwere ike ijikọ ngwaọrụ site na ya Ntinye jaak 3.5mm mini Jack. Ọzọkwa pụta ìhè na njikọta ihe awade ya na igwe okwu igwe okwu nke Energy Sistem site na nke anyị nwekwara ike ịnụ ụtọ Alexa.
Herezụta ebe a Energy Sistem Smart Ọkà okwu 5 na mbupu n'efu na Amazon
Isi ihe a igbe mkpuchi e ji osisi rụọ nke ahụ na-enye ịdị ọkụ na ogo nke ụda nke ọkà okwu nwere ọgụgụ 5. nwere. Ya nwụnye na ojiji na-irè mfe a raara onwe ya nye na ntinye aka ekele nke na n'ime obere oge ị ga-enwe ike iji ọkà okwu na ikike zuru oke.
Developer: Usoro Ike
Smart ọkà okwu 5 teknuzu nkọwapụta tebụl
Nlereanya smart ọkà okwu 5
Usoro ụda Nyocha nke 2.0
Potencia 16W -2 ndị na-ekwu okwu nke 8W-
Igwe okwu 2 nduzi zuru oke
Njikọ WIFI - Bluetooth - Aux jaak 3.5 mm
Akụkụ 112 x 112 x 211
Ibu ibu 1.260 kg
Ahịa 99.88 €
Linkzụta njikọ Energy Sistem Smart Ọkà Okwu 5
Sleek na oge a na imewe
Nghọta igwe okwu
Ọnụahịa ahụ bụ ọnụ
Azịza ngwa ngwa
Ike dị ala maka egwu n'èzí
Energy Sistem Smart Ọkà Okwu 5
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Nyochaa Sistem smart ọkà okwu 5
Huawei FreeLace, anyị na-enyocha isi ekweisi ndị a dị ukwuu
Acer Predator X27, ihe nlekota na ihe ọ bụla gamer nrọ nke [Analysis]